စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ များသို့ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးမှု ‹ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန
စစ်ဆေးရေးအရာရှိများ အနေဖြင့် စီမံချက်အရ တစ်လလျှင် အလုပ်ရုံ (၂၅) ရုံ၊ အလုပ်ရုံငယ် (၂၅) ရုံ စစ်ဆေးရ မည် ဖြစ်ပါသည်။
စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှု အခြေအနေများ အပြည့်အစုံသိရှိနိုင်ရန်.. (406)
ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အလုပ်ရုံ	 အလုပ်သမား	 အလုပ်ရုံငယ်	 အလုပ်သမား
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၂၄၈၂ ၁၄၄၆၈၀
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၂၃၀၄ ၉၀၀၃၂
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၁၇၂၀ ၇၂၄၁၃ ၈၆၆
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၆၀၈၆ ၂၉၁၀၇၇ ၃၃၃၇ ၁၂၅၂၁
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၅၀၃၃ ၅၅၉၆၃၄ ၈၇၇၇ ၂၉၄၄၉
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ မင်္ဂလာဒုံ ၊ ပျဉ်းမပင် စက်မှုဇုန် ရှိ ရသာချို ခေါက်ဆွဲ စက်ရုံ ၊အစည်း အဝေးခန်းမတွင် (၂၄.၈.၂၀၁၃)ရက်နေ့ ၊ နံနက် (၀၉းဝဝ)နာရီမှ (၁၂း၃၀)နာရီထိ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး နှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲကျင်းပခဲ့ရာ ကျား (၁၁)ဦး ၊ မ (၂၁)ဦး ၊ စုစုပေါင်း (၂၉)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမား ဥပဒေ စစ်ဆေးရေး ဦးစီး ဌာနမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဥက္ကာသိန်း မှ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး နှင့် ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ၊ ဦးစီးအရာရှိ ဦးဖြိုးဝေဇော်မှ နေ့စဉ် ဖြစ်ပွားတတ်သော မတော်တဆ ထိခိုက်မှုများ အကြောင်းတို့ကို ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဝင်းရှိန် ဦးဆောင်၍(၂၈.၈.၂၀၁၃) ရက်နေ့တွင် နံနက်(၀၉း၃၀)နာရီမှ (၁၁း၃၀)နာရီထိ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုန် ၊ ကနောင်ခန်းမတွင် အလုပ်သမားရေးရာ သိမှတ်ဖွယ်ရာများနှင့် လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး နှင့် ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ အသိပညာပေး ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခဲ့ရာ စက်ရုံ ၊ အလုပ်ရုံများမှ ပိုင်ရှင် /မန်နေဂျာ ၊ အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်း (၇၁)ဦး တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။
ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်တွင် လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိကြသော အလုပ်သမားများ အနေဖြင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာ လုပ်ကိုင်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်လျှက် အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမား ဥပဒေ စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာနမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဥက္ကာသိန်း နှင့် ဦးစီးအရာရှိ ဦးစောဌေးမြင့်ဦးတို့မှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ ဗဟန်းမြို့နယ် ၊ ကမ္ဘာအေးစေတီ လမ်းပေါ်ရှိ HAGL (ဗီယက်နမ်) ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်မှ အလုပ်သမား ကျား (၁၂၀)ဦးအား (၇.၉.၂၀၁၃)ရက်နေ့ ၊ နံနက် (၁၁းဝဝ)နာရီ မှ (၁၃းဝဝ)နာရီထိ စုဝေးခန်းမတွင် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်များတွင် ဖြစ်ပွားတတ်သည့် ဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ၊ လုပ်ငန်းခွင် ဘေး အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး နှင့် ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ အခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်း ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။
လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး နှင့် ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ အသိပညာများ တိုးပွား စေရန် နှင့် အလုပ်သမား ဥပဒေ ဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက်များ သိရှိလိုက်နာစေရန် ရည်ရွယ်လျှက် ဤဦးစီး ဌာန ၊ မွန်ပြည်နယ်ရုံးမှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးထိန်ဝင်းဦး နှင့် မော်လမြိုင် (ခရိုင်ရုံး)မှ ဦးစီးအရာရှိ (အလုပ်ရုံ)ဦးစည်သူအောင်တို့သည် အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမား ဥပဒေ စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန ၊ မွန်ပြည်နယ်ရုံးတွင် (၂၁.၈.၂၀၁၃)ရက်နေ့ ၊ နံနက် (၁၀းဝဝ)နာရီမှညနေ (၁၆းဝဝ)နာရီ ထိ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး နှင့် အလုပ်သမားရေးရာ အသိပညာပေး ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ ၁၉၅၁ အလုပ်ရုံများ ဥပဒေ ၊ ၁၉၅၁ ခုနှစ် ခွင့်ရက် နှင့် အလုပ်ပိတ်ရက် ဥပဒေ နှင့် ၁၉၃၆ ခုနှစ် လုပ်ခပေးရေး အက်ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များအား ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ၊ ဦးစီးအရာရှိ (အလုပ်ရုံ)မှ လုပ်ငန်းခွင် မတော်တဆထိခိုက်မှု၊ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ၊ လုပ်ငန်းခွင် တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မတော်တဆ ထိခိုက်မှု အကြောင်းအရင်းများ၊အမှုန်အမွှားနှင့် အခိုးအငွေ့အန္တရာယ် ကာကွယ်ရေး၊ မီးဘေး အန္တရာယ် ကာကွယ်ရေး ၊ ကိုယ်ခန္ဓာ ကာကွယ်ရေး ၀တ်စုံပစ္စည်းများ ရွေးချယ် အသုံးပြုနည်းနှင့် စက်ကိရိယာ ကင်းရှင်းရေး တို့ကို ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးခဲ့ရာ စက်ရုံ ၊ အလုပ်ရုံ စုစုပေါင်း (၂၄)ရုံမှ လုပ်ငန်းပိုင်ရှင် ၊ မန်နေဂျာ နှင့် လုပ်သား ကြီးကြပ်ရေးမှူး ကျား (၂၆)ဦး ၊ မ (၅)ဦး ၊ စုစုပေါင်း (၃၁)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
မွန်ပြည်နယ်ရုံးမှဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် မော်လမြိုင်(ခရိုင်ရုံး)မှ ဦးစီးအရာရှိ(အလုပ်ရုံ)တို့မှ လုပ်ငန်းခွင်ဘေး အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ အသိပညာများနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေဆိုင်ရာပြဌာန်းချက် များရှင်းလင်းဆွေးနွေး ပို့ချနေပုံ
စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံများတွင် မတော်တဆထိခိုက်မှုလျော့နည်းကျဆင်းစေရန်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေတိုးတက် ကောင်းမွန်စေရန် ရည်ရွယ်လျက် အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ၊ ဦးဝင်းရှိန် ဦးဆောင်၍ ဦးစီးအရာရှိ(စီမံ-၃)၊ ဦးလှမျိုးအောင်၊ ဦးစီးအရာရှိ (စီမံ-၂)၊ဦးစောဌေးမြင့်ဦးတို့သည် ၁.၃.၁၃ ရက်နေ့(ဝ၉း၃၀)နာရီမှ(၁၁းဝဝ)နာရီထိ၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊စက်မှုဇုန်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ ရုံး၊ ကနောင်ခန်းမ၌မန်နေဂျာ၊ကြီးကြပ်ရေးမှူး၊ကျား(၅၁)ဦး၊မ(၁၃)ဦး၊စုစုပေါင်း(၆၄)ဦးအားလုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဥပဒေ(မူကြမ်း)ပါ အလုပ်ရှင်၊အလုပ်သမားတာဝန်များ၊ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရုံများအက်ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များ၊လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း‌ရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံများတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော မတော်တဆ ထိခိုက်မှုများနှင့် ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းတို့ကို အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။
စက်ရုံ ၊ အလုပ်ရုံများတွင် မတော်တဆထိခိုက်မှုလျော့နည်း ကျဆင်းစေရန်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ရည်ရွယ်လျှက် အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ၊ ဦးဝင်းရှိန် ဦးဆောင်၍ ဦးစီးအရာရှိ(စီမံ-၃)၊ ဦးလှမျိုးအောင်၊ ဦးစီးအရာရှိ (စီမံ-၂)၊ ဦးစောဌေးမြင့်ဦးတို့သည် (၂၈.၂.၂၀၁၃)ရက်နေ့ (၀၉းဝဝ)နာရီ မှ (၁၁းဝဝ)နာရီထိ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရွှေပြည်သာစက်မှုှုဇုန် စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီရုံး၊ကနောင်ခန်းမ၌ စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံများမှ မန်နေဂျာ၊ ကြီးကြပ်ရေးမှူး၊ ကျား(၄၇)ဦး၊ မ(၆) ဦး၊ စုစုပေါင်း(၅၃)ဦးအား ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရုံများ အက်ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံများတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော မတော်တဆ ထိခိုက်မှုများနှင့် ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရန် နည်းလမ်းတို့ကို အသိပညာပေး ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ မန္တလေးခရိုင်ရုံးမှ ဦးစီးအရာရှိ (အလုပ်ရုံ စစ်ဆေးရေး) ဦးဖြိုးဝေဇော်သည် (၁၀.၉.၂၀၁၂)ရက်နေ့တွင် ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်ရှိ စက်ရုံများသို့ သွားရောက်၍ လုပ်ငန်းခွင် လေဝင်လေထွက်၊ အလင်းရောင်၊ ဆူညံသံပမာဏနှင့် အပူချိန် အခြေအနေများကို ကွင်းဆင်းတိုင်းတာ စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
မန္တလေးစက်မှုဇုန်မြန်မာမေကောင်းသစ်ချောထည်စက်ရုံ၏ ဘွိုင်လာစက်အနီး၌ WEM တိုင်းတာနေပုံ
မန္တလေးစက်မှုဇုန် NTT သစ်အချောထည်စက်ရုံ၏ အထပ်သားကော်စက်အနီး၌ WEM တိုင်းတာစစ်ဆေးနေပုံ
မန္တလေးစက်မှုဇုန်၊ Ve Ve အချိုရည်စက်ရုံ၏ ပလပ်စတစ်ဗူးဆွဲစက်အနီး WEM တိုင်းတာစစ်ဆေးနေပုံ
အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေ စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန မှ အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးအရာရှိ များ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ (၃-၈-၂၀၁၂ မှ ၉-၈-၂၀၁၂ ထိ)
၃-၈-၂၀၁၂ ရက်နေ့မှ ၉-၈-၂၀၁၂ ရက်နေ့အထိ (281)
အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေ စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန မှ အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးအရာရှိ များ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ (၉-၇-၂၀၁၂ မှ ၂၄-၇-၂၀၁၂ ထိ)
၉-၇-၂၀၁၂ မှ ၂၄-၇-၂၀၁၂ အထိ စစ်ဆေးချက်အပြည့်အစုံ . . . (304)
၉-၇-၂၀၁၂ မှ ၁၃-၇-၂၀၁၂ အထိ စစ်ဆေးချက်အပြည့်အစုံ . . . (543)
Myanmar Happy Cook Co.,Ltd ၏ လုပ်ငန်းခွင်မတော်တဆထိခိုက်မှု(ပြင်းထန်) စစ်ဆေးခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ မင်္ဂ္လာဒုံမြို့နယ်၊ ပျဉ်းမပင်စက်မှုဇုန်၊ အမှတ်(၃) လမ်းမကြီး၊ အမှတ် (၃၉) ရှိ ဦးညိုမင်းဦး ပိုင် Myanmar Happy Cook Co., Ltd ၌ ၁၃.၇.၁၂ ရက်နေ့ (၁၁:၄၅) နာရီတွင် အထွေထွေလုပ်သား မောင်ခိုင်လင်း ၊ အသက် (၁၉) နှစ်သည် ဒန်အိုးထောင်း ပုံဖော်စက်တွင် ဝဲဘက်လက်ကောက်ဝတ်အထက်မှ ပြတ်တောက်သွားသည့် ထိခိုက်မှုကို အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ၊ အလုပ်ရုံ နှင့် အလုပ်သမား ဥပဒေ စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ ဦးစောဌေးမြင့်ဦး ၊ ဦးစီးအရာရှိ (စီမံ-၂) နှင့် ဦးမျိုးမင်းထွန်း ၊ ဦးစီးအရာရှိ (စီမံ-၁) တို့မှ ၁၆.၇.၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် သွားရောက် စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
စက်ရုံ၏ ပြုလုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ဒန်ထည်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကို ဦးစွာ အရည်ကျိုပြီး အလျား ၂၅၀ မီလီမီတာ ၊ အနံ ၂၁၀ မီလီမီတာ ၊ အထူ ၁၃ မီလီမီတာ ဒန်ပြားဖြစ်အောင် ပုံသွန်းလောင်းခြင်း၊ ပုံသွန်းလောင်း၍ရရှိလာသော ဒန်ပြားများကို လိုအပ်သော အထူရရှိအောင် Roller ဖြင့် ကြိတ်ယူခြင်း ၊ ဒန်ပြားများကို အဝိုင်းပြုလုပ်ကာ ဒန်သားပျော့သွားအောင် မီးဖြင့် ပေါင်းတင်ခြင်း၊ ဒန်ပြားအဝိုင်းများကို အိုးပုံဖော်ထောင်းခြင်း၊ အချောကိုင်ခြင်း ၊ ပေါ်လစ်တင်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။ စက်ရုံ၏ ထုတ်လုပ်မှု အင်အားမှာ တစ်ရက်လျှင် ဒန်အိုး (၁၀ဝ) ခု ထွက်ရှိပါသည်။
ယခုထိခိုက်မှုဖြစ်ပွားပုံမှာ ဒန်ပြားအဝိုင်းများကို အိုးပုံဖော်သည့် ဒန်အိုးထောင်းပုံဖော်စက် တွင် ဖြစ်ပါသည်။ ထိခိုက်သူ အလုပ်သမား မောင်ခိုင်လင်းသည် အချင်း ၃၃၅ မီလီမီတာ ၊ အထူ ဝ.၉၅ မီလီမီတာ ရှိသော ဒန်ပြားအဝိုင်းကို အိုးပုံဖော်ရန် ဖိအားချိန်ညှိပြီး ဒန်အိုးထောင်းစက်ဖြင့် ပုံဖော်ရာ တွင် ဖိအား များသွား၍ ဒန်အိုးပုံမပေါ်ဘဲ ဒန်အိုးအဝိုင်းပြားမှာ စက်ထဲ၌ ပြတ်ကျန် နေခဲ့ပါသည်။ ထိခိုက်သူ အလုပ်သမားသည် ယာဘက်လက်ဖြင့် စက်ခလုတ်ကို ကိုင်၍ ဝဲဘက် လက်ဖြင့် စက်ထဲ၌ ပြတ်ကျန်ခဲ့သည့် ဒန်အိုး အဝိုင်းပြားအား ဆွဲယူစဉ် ယာဘက်လက်မှ စက်ခလုတ်ကို နှိပ်မိ၍ ပုံဖော် ထောင်းစက်သည် ဝဲဘက် လက်ကောက်ဝတ်ပေါ်သို့ အရှိန်ဖြင့်ကျကာ လက်ကောက်ဝတ် အရိုးကြေ သွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသည်။
ယခုထိခိုက်မှုဖြစ်စဉ်သည် အလုပ်သမားမှ စက်ထဲ၌ ပြတ်ကျန်ခဲ့သည့် ဒန်အိုးအဝိုင်းပြားအား ဆွဲထုတ်ရန် လက်သုံးကိရိယာအား အသုံးမပြုခြင်း၊ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးအတွက် Two Hands Control စနစ်အား အသုံးမပြုခြင်း၊ ထိခိုက်သူ အလုပ်သမားသည် လုပ်သက် (၁) လသာ ရှိ၍ အန္တရာယ်ရှိသော လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်သက်နည်းပါး၍ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု မရှိသော အလုပ်သမား များကို ခိုင်းစေခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်ပွားရသည်ဟု သုံးသပ်ရပါသည်။
နောင်တွင် အလားတူ လုပ်ငန်းခွင်မတော်တဆ ထိခိုက်မှု မဖြစ်ပွားစေရန် အောက်ပါအချက်များအား ညွှန်ကြားခဲ့ပါသည်-
(က) ဒန်အိုးပုံဖော်ထောင်းစက်အား Two Hands Control စနစ်ဖြင့် ပြောင်းလဲ သုံးစွဲရန်၊
(ခ )	စက်ထဲတွင် ပြတ်ကျန်ခဲ့သည့် ဒန်ပြားအပိုင်းအစများကို လက်သုံးကိရိယာအသုံးပြု၍
(ဂ )	ဒန်ထည်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများအား ဖြတ်တောက်ခြင်း(သို့) အရည်ကျိုခြင်း ပြုလုပ် ရာတွင် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ပစ္စည်းများ မပါဝင်အောင် အဆင့်ဆင့် ရွေးချယ်မှု ပြုလုပ်ပြီး Safe Work Procedure များကို အများမြင်သာအောင် ချိတ်ဆွဲထားရန်၊
ပုံ(၁)ထိခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အလုပ်သမား အလုပ်လုပ်ပုံအားသရုပ်ပြပုံ
လှိုင်သာယာမြို့နယ် ၊ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်ရှိ စက်ရုံများသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးညွှန်ကြားမှုများ
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ၊ အလုပ်ရုံ နှင့် အလုပ်သမားဥပဒေ စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရှိ (စီမံ-၂) (အလုပ်ရုံ စစ်‌ဆေးရေး) ဦးစည်သူအောင်သည် (၁၀.၇.၂၀၁၂)ရက်နေ့တွင် လှိုင်သာယာမြို့နယ် ၊ရွှေလင်ဗန်း စက်မှုဇုန်ရှိ ၊ မြန်မာ့ဂုဏ်ရည် ဆေးဆိုးပန်းရိုက် စက်ရုံ ၊ သိန်းကမ္ဘာ ပီနံအိတ် အိတ်စက်ရုံ ၊ အာရုဏ်ဦး ပီနံအိတ် စက်ရုံ ၊စိန်ငွေ မြ ကြက်အူချောင်း စက်ရုံ နှင့် ချယ်ရီ အထည်ချုပ်စက်ရုံများသို့လည်းကောင်း၊ ဦးစီးအရာရှိ (စီမံ-၃)(အလုပ်ရုံစစ်‌ဆေးရေး) ဦးဥက္ကာသိန်း နှင့် ဦးစီးအရာရှိ (စီမံ-၂) (အလုပ်ရုံစစ်‌ဆေးရေး) ဦးစောဌေးမြင့်ဦးတို့သည် မင်္ဂ္လာဒုံမြို့နယ် ၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် နှင့် သင်္ဃ္န်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ Myanmar Posco Steel စက်ရုံ ၊ မင်းထွန်းထီးစက်ရုံ ၊ YQL ငါးအအေးခန်းစက်ရုံ ၊ မုတ္တမပင်လယ်ငါးအအေးခန်းစက်ရုံ ၊ Top Strong Painting စက်ရုံများသို့ သွားရောက်၍ လုပ်ငန်းခွင် လေဝင်လေထွက် ၊ အလင်းရောင် ၊ ဆူညံသံ ပမာဏ နှင့် အပူချိန် အခြေအနေတို့ကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးတိုင်းတာမှုများ ဆောင်ရွက်ပြီး ညွှန်ကြားချက်များ ၊ အကြံပြုချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
(က)	လေဝင်လေထွက်ညံ့သော လုပ်ငန်းခွင်များ နှင့် အပူဒဏ်များသော လုပ်ငန်းခွင်များ တွင် လေဝင်လေထွက် ကောင်းမွန်စေရန် နှင့် အပူ သက်သာစေရန် လေစုပ်ပန်ကာ (Exhaust Fan)များ တပ်ဆင်ပေးရန် နှင့် လေဝင်လေထွက်အပေါက်များ ဖွင့်ထား ပေးရန် ၊
(ခ )	အလင်းရောင် အားနည်းသော လုပ်ငန်းခွင်များ၌ အလင်းရောင် လုံ လောက်စွာ ရရှိရန် လျှပ်စစ်မီးချောင်းများ ထပ်မံ တိုးချဲ့တပ်ဆင်ရန် ၊
(က)	ဆူညံသံများသော လုပ်ငန်းခွင်များတွင် အလုပ်သမားများအတွက် နားအဆို့ (ear plug)များ လုံလောက်စွာ ထုတ်ပေး၍ ဝတ်ဆင် လုပ်ကိုင်စေရန် နှင့် လိုအပ်ပါက အလုပ်သမားများကို အလှည့်ကျ စနစ်ဖြင့် ခိုင်းစေရန် ၊
ရန်ကင်းမြို့နယ် ၊ ပြည်တော်အေး လမ်းရှိ မင်းထွန်းထီးစက်ရုံ၌ လုပ်ငန်းခွင် ‌လေဝင်လေထွက် တိုင်းတာနေပုံ
Myanmar Posco Steel သွပ်ပြားစက်ရုံ၌ လုပ်ငန်းခွင်ဆူညံသံတိုင်းတာနေပုံ
SAKURA အထည်ချုပ်စက်ရုံသို့ စစ်ဆေးညွှန်ကြားမှုများ
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ကွပ်ကဲမှုအောက် ရှိ လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရုံးမှ အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးအရာရှိ ဦးအောင်နိုင် သည် (၉.၇.၂၀၁၂) ရက်နေ့၊ (၁၃:ဝဝ)နာရီအချိန်တွင် အမှတ်(၇၄)၊ ဦးရွှေအိုးလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၃)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် SAKURA အထည်ချုပ်စက်ရုံရှိ အလုပ်သမားများ၏ အကျိုးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခွင့် ပေးနိုင်ရန် ဥပဒေပါ ရပိုင်ခွင့်များပြည့်ပြည့်ဝဝနှင့်မှန်မှန်ကန်ကန်ရရှိစေရန်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး နှင့် ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ အလေးထား ဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက် စက်ရုံတွင် လိုက်လံစစ်ဆေးညွှန်ကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်. . . . . . .
SAKURA အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ စစ္ေဆးေခ်က္အျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈရန္ . . . (727)
စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများသို့ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးမှု
အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဝင်းရှိန်သည် ဦးစီးအရာရှိများ လိုက်ပါ၍ ၁၀.၇.၁၂ ရက်နေ့ (၁၃:၁၅) နာရီ တွင် လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ အလုပ်သမား ကျား (၅၁)ဦး ၊ မ(၁၂၁၉)ဦး၊ ပေါင်း (၁၂၇၀)ဦးဖြင့် လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသော ဦးမောင်မောင်အေး ပိုင် East Growth အထည်ချုပ် စက်ရုံ၊ (၁၃:၄၅) နာရီတွင် အလုပ်သမား ကျား (၄၈)ဦး၊ မ(၁၀၇၂)ဦး၊ ပေါင်း (၁၁၂၀)ဦး ဖြင့်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသော ဦးစိုးဝေ ပိုင် တိုးမြတ်အောင် ဇာပန်းထိုး စက်ရုံ ၊ (၁၄:၁၀) နာရီတွင် အလုပ်သမား ကျား (၁၇)ဦး၊ မ(၃၃၆)ဦး၊ ပေါင်း (၃၅၃)ဦး ဖြင့်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသော ဒေါ်သန္တာပိုင် စံပယ်ပွင့် အထည်ချုပ် စက်ရုံ၊ (၁၄:၃၀) နာရီတွင် အလုပ်သမား ကျား (၈၉)ဦး၊ မ(၂၈၃)ဦး၊ ပေါင်း (၃၇၂)ဦး ဖြင့်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသော ဒေါ်ကျင်မွေး ပိုင် အာရှနှင်းဆီ အထည်ချုပ် စက်ရုံ၊ (၁၄:၅၀) နာရီတွင် အလုပ်သမား ကျား (၁၂၈)ဦး၊ မ(၇၅၆)ဦး၊ ပေါင်း (၈၈၄)ဦး ဖြင့် လုပ်ကိုင်လျှက် ရှိသော ဒေါ်တင်တင်ဆွေ ပိုင် Moon Crab အထည်ချုပ် စက်ရုံ နှင့် (၁၅:၂၀) နာရီတွင် အလုပ်သမား ကျား (၇၀)ဦး၊ မ(၈၁၈)ဦး၊ ပေါင်း (၈၈၈)ဦး ဖြင့်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသော ဒေါ်သက်ထားဆွေ ပိုင် Hall Mark အထည်ချုပ် စက်ရုံသို့ရောက်ရှိ၍ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လှည့်လည် ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ပိုင်ရှင် ၊ မန်နေဂျာ၊ ကြီးကြပ်သူ၊ လုပ်သားများ နှင့် တွေ့ဆုံ၍ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး နှင့် ကျန်းမာ သန့်ရှင်းရေး၊ သတ်မှတ် အလုပ်ချိန်အတိုင်း အချိန်ပို အပါအဝင် စေခိုင်းရေး ၊ လစာ ထုတ်ရက်များတွင် အချိန်ပို မခိုင်းဘဲ စေလွှတ်ရေး၊ အလုပ်သမားများ သက်သာ ချောင်ချိမှုဂရုပြုရေး ၊ အလုပ်ရှင်အလုပ်သမား အငြင်းပွားမှု မဖြစ်ပေါ်စေရန် EC စာချုပ်ပါအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရေး ၊ကလေး အလုပ်သမား များ နှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေပါအတိုင်း လိုက်နာရေးတို့ကို အလေးထား ဆောင်ရွက်ရန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။
East Growth အထည်ချုပ် စက်ရုံတွင် ၁၇ – ၁၈ နှစ်ကြား ကလေးအလုပ်သမား (၂)ဦး နှင့် တိုးမြတ်အောင် အထည်ချုပ် စက်ရုံတွင် ၁၆-၁၈ နှစ်ကြား (၁၁၆)ဦး၊ အာရှနှင်းဆီ အထည်ချုပ် စက်ရုံတွင် ၁၆-၁၈ နှစ်ကြား (၂)ဦး၊ Moon Crab အထည်ချုပ်စက်ရုံတွင် ၁၅-၁၈ နှစ်ကြား (၉၉)ဦး နှင့် Hall Mark အထည်ချုပ်စက်ရုံတွင် ၁၆-၁၈ နှစ်ကြား (၂၀)ဦး တွေ့ရှိခဲ့၍ ၁၈နှစ် မပြည့်သေးသည့် အလုပ်သမားများကို တာဝန်ခံ ဆရာဝန်၏ လူကြီးကဲ့သို့ အလုပ်လုပ်နိုင်ကြောင်း ဆေးထောက် ခံချက် ရယူ၍ အလုပ်ဆက်လက် လုပ်ကိုင်စေရန် ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။
အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် မှ အထည်ချုပ်စက်ရုံအတွင်း စစ်ဆေးစဉ်